အထူးအားထုတ်စရာမလိုဘဲ အလိုလိုကို ဆွဲဆောင်မှုအားပြင်းနေတဲ့ ရာသီခွင် (၃) ခု - CeleLove
တစ်ချို့လူတွေဟာ မွေးကတည်းက ကံကောင်းကြပါတယ်။ ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုဘဲ ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာမျိုး တစ်နည်းအားဖြင့် မတောင်းပဲ ပြည့်တဲ့ဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ကြိုးစားစရာမလိုဘဲ အလိုလို Sexy ကျနေတဲ့ ညှို့အားအပြင်းဆုံး ရာသီခွင် (၃) ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုရှားရှားပါးပါးရာသီခွင်ထဲမှာ သင်ပါနေရင်တော့ သင်ဟာ တကယ်ကိုကံကောင်းတဲ့သူပါ နော် ….
Scorpio တွေဟာ ရာသီခွင်တွေအားလုံးထဲမှာ ညှို့အားအပြင်းဆုံး ရာသီခွင်ပါ။ သူတို့ကို ချစ်မိသွားရင် မလွယ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုမေ့လိုက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပါ။ Scorpio တွေဟာ တစ်ဖက်သားရဲ့နှလုံးသားထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ ထွေထွေထူးထူးတွေကြိုးစားနေစရာမလိုပါဘူး။ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ကို ညှို့ငြင်စွမ်းရှိနေကြလို့ပါ။ ဒီရာသီဖွားတွေဟာ ရုပ်အရမ်းမချောရင်တောင် သူတို့မှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်တွေက လူတွေကို ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ဘာလိုချင်လဲဆိုတာ တန်းသိနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုလိမ်လို့မရပါဘူး …။
Pisces တွေဟာ ဆန်းသစ်ကွန့်မြူးနိုင်စွမ်းရှိပြီး စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တစ်ဖက်လူကို အံ့သြသွားအောင် အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ကိုမရိုးမရွဖြစ်အောင် အရမ်းလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားကြည်နူးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အီစီကလီလုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတွေဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်တစ်ဖို့တည်းပဲ ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းအလေးထားပြီး တစ်ဖက်လူစိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ သူတို့ကို ချစ်မိသွားရင် တသသဖြစ်နေရတာ မဆန်းတော့ ပါဘူး ….။
3. LEO (July 23 – August 23)
Leo တွေဟာ လူကြားထဲမှာ ထင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ ပင်ကိုယ်ရုပ်ခံကြောင့် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သားစိတ်ကျေနပ်အောင် အရမ်းလုပ်ပေးတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း အရမ်းကို ဆွဲဆောင်အားပြင်းတဲ့သူလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
အထူးအားထုတျစရာမလိုဘဲ အလိုလိုကို ဆှဲဆောငျမှုအားပွငျးနတေဲ့ ရာသီခှငျ (၃) ခု
တဈခြို့လူတှဟော မှေးကတညျးက ကံကောငျးကွပါတယျ။ ဘာမှကွိုးစားစရာမလိုဘဲ ကောငျးတဲ့အရာတှဖွေဈလာတာမြိုး တဈနညျးအားဖွငျ့ မတောငျးပဲ ပွညျ့တဲ့ဆုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ ကွိုးစားစရာမလိုဘဲ အလိုလို Sexy ကနြတေဲ့ ညှို့အားအပွငျးဆုံး ရာသီခှငျ (၃) ခုပဲရှိပါတယျ။ ဒီလိုရှားရှားပါးပါးရာသီခှငျထဲမှာ သငျပါနရေငျတော့ သငျဟာ တကယျကိုကံကောငျးတဲ့သူပါ နျော ….
Scorpio တှဟော ရာသီခှငျတှအေားလုံးထဲမှာ ညှို့အားအပွငျးဆုံး ရာသီခှငျပါ။ သူတို့ကို ခဈြမိသှားရငျ မလှယျပါဘူး။ သူတို့ကိုမလေို့ကျဖို့ဆိုတာ ဘယျတော့မှ မဖွဈနိုငျတော့လို့ပါ။ Scorpio တှဟော တဈဖကျသားရဲ့နှလုံးသားထဲကို ဝငျရောကျဖို့ ထှထှေထေူးထူးတှကွေိုးစားနစေရာမလိုပါဘူး။ အလိုလိုနရေငျးနဲ့ကို ညှို့ငွငျစှမျးရှိနကွေလို့ပါ။ ဒီရာသီဖှားတှဟော ရုပျအရမျးမခြောရငျတောငျ သူတို့မှာ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ အားသာခကျြတှကေ လူတှကေို ဆှဲဆောငျပါတယျ။ လူတဈယောကျကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ သူတို့ဘာလိုခငျြလဲဆိုတာ တနျးသိနိုငျတဲ့သူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ သူတို့ကိုလိမျလို့မရပါဘူး …။
Pisces တှဟော ဆနျးသဈကှနျ့မွူးနိုငျစှမျးရှိပွီး စိတျကူးယဉျသမားတှဖွေဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ တဈဖကျလူကို အံ့သွသှားအောငျ အမွဲတမျးလုပျနိုငျကွပါတယျ။ တဈဖကျလူရဲ့ စိတျကိုမရိုးမရှဖွဈအောငျ အရမျးလုပျတတျတဲ့သူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သူတို့နဲ့ပတျသကျရငျ အမွဲတမျးစိတျလှုပျရှားကွညျနူးနရေမှာဖွဈပါတယျ။ အီစီကလီလုပျတဲ့နရောမှာ ဆရာကွီးတှဖွေဈပမေယျ့ ကိုယျ့တဈဖို့တညျးပဲ ကွညျ့တတျတဲ့သူတှတေော့မဟုတျပါဘူး။ တဈဖကျလူရဲ့ စိတျခံစားခကျြကိုလညျးအလေးထားပွီး တဈဖကျလူစိတျကနြေပျအောငျ လုပျတတျတဲ့သူတှပေါ။ ဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ သူတို့ကို ခဈြမိသှားရငျ တသသဖွဈနရေတာ မဆနျးတော့ ပါဘူး ….။
Leo တှဟော လူကွားထဲမှာ ထငျးနတေဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ထငျရှားပျေါလှငျတဲ့ ပငျကိုယျရုပျခံကွောငျ့ ပိုပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိကွတာဖွဈပါတယျ။ လူအမြားရဲ့ အာရုံကို ဖမျးစားထားနိုငျတဲ့သူတှဖွေဈပွီး တဈဖကျသားစိတျကနြေပျအောငျ အရမျးလုပျပေးတတျတဲ့သူတှပေါ။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာသာမကပဲ လိငျပိုငျးဆိုငျရာမှာလညျး အရမျးကို ဆှဲဆောငျအားပွငျးတဲ့သူလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျနျော …။ ။
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ် သိတတ်တဲ့သူတွေသာ ရမယ့် ကံကောင်းခြင်း (၅) မျိုး